UZintle Mbusi uxhobisa ulutsha eMthatha! | Ilisolezwe
UZintle Mbusi uxhobisa ulutsha eMthatha!
Iindaba / 10 August 2017, 02:00am / Abongile Ginya no Pedro Maphelo
Oosaziwayo boMhlobo Wenene abazakuzimasa imfundiswano ngonomathotholo eMthatha
Abantu abonomnqweno kwezosasazo, kuquka nabo sele bekweli candelo, bazakufumana ithuba elinqabileyo lokufunxa ulwazi ngezosasazo kule mpelaveki.
Inkampani yomsasazi woMhlobo Wenene uZintle Mbusi ebizwa ngokuba yiZM Media izakubamba indibano ngoMgqibelo, eLA Peal Boutique Hotel, eMthatha - apho kuzakube kusabelwana kukwaxhotyswa abantu ngezosasazo kunomathotholo (Radio Workshop).
Le nkquleqhu yenziwa nguMbusi buqu - kodwa uzakube etshila eqongeni nabanye abasasazi boMhlobo Wenene FM abaziwayo.
UMbusi uthi izinto sele zime ngobume ngoku nangona nje esithi akukhange kubelula ukuququzelela le ndibano. “Khange kube lula kuba asikhange sifumane mntu usixhasayo okanye usincedisayo. Yonke into siyibhatale ngokwethu kodwa ndikwazile ukuphumelela kuba andenzeli mna ndenzela uluntu,” utshilo uMbusi.
UMbusi unawo amava okusasaza kunomathotholo wasekuhlaleni kwaye nemiceli-mngeni ejongene namajelo osasazo asekuhlaleni uyawazi. Sele esuka kwiKhanya FM eseGcuwa, kwiNkqubela FM eseBhayi kwakunye nakwi-Unitra Community Radio eseMthatha phambi kokungena kuMhlobo Wenene FM. Uthi eyona njongo iphambili yale mfundiswano ngoMgqibelo kukuba uzakube esabelana nabantu ngolwazi olubalulekileyo olwenzeka ngaphaya komboko.
“Eyona nto kukunika abanye abantu ulwazi abangenalo xa kuthethwa ngonomathotholo, ngolwazi esinalo nathi. Xa ungumsasazi, ube usendaweni engcono kunakuqala, abantu bayakubuza ukuba ingaba wenze njani. Ngolu suku izakube ilelothuba lokubacacisela ukuba waqalaphi waze wafika njani. Sizakubafundisa nangezinto ezenzeka ngaphakathi xa ungumsasazi,” utshilo uMbusi.
Oosaziwayo abazakube beyinxalenye yoku nguBukiwe Zide ongumfundi weendaba kuMhlobo Wenene FM, Sterra Ngqezana wezemidlalo kuMhlobo Wenene, Thando Mdutyana umvelisi weenkqubo kwiTru FM, iSibakho Media kwakunye nabazakube besonwabisa iGetto Colleagues, DJ Mist. I’solezwe liyinxalenye noku.